Genetic Ozi pụrụ inyere anyị aka ịghọta Lifestyle ize ndụ for Disease - News Ọchịchị
Genetic Ozi pụrụ inyere anyị aka ịghọta Lifestyle ize ndụ for Disease
Genetic variants ịkọ ndu n'ihe ize ndụ n'ihi ọrịa, ma ha nwekwara ike inwe ike ịgwa anyị banyere heritable akparamàgwà ndị pụrụ ịkpata
Isiokwu a na-akpọ “Genetic ọmụma nwere ike inyere anyị aka ịghọta si ebi ndụ dị ize ndụ nye maka ọrịa” e dere site Suzi Gage, n'ihi na theguardian.com on Monday 22 February 2016 13.16 UTC
Mgbe ị na-agụ isiokwu na-azọrọ na e nwere ọtụtụ ihe ndị mkpụrụ ndụ ihe nketa na ịkọ a ọrịa, -emekarị nke a ọmụma na-abịa site genome-n'obosara mkpakọrịta ọmụmụ (GWAS). Ndị a amụma-free nyochara na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ, na anya n'ihi na chiri anya n'etiti a ọrịa na mkpụrụ ndụ ihe nketa ọdịiche ndị dị ọtụtụ ọtụtụ narị puku ebe gafee genome.
Ma ebe ọ maara na e nwere 108 mkpụrụ ndụ ihe nketa ọnọdụ metụtara na isi mgbaka idịghe na bara uru ma ọ bụrụ na ị maara ihe ndị a mkpụrụ ndụ ihe nketa variants-eme. GWAS bụ a research ngwá ọrụ, a ụzọ nke na-enyere anyị aka ịghọta a ọrịa. Mgbe ụfọdụ, ọ na-mara na a variant Koodu maka a protein, na mgbe ahụ na ndị ọrụ nke na site n'usoro na-adị mfe ịghọta, ma n'oge ndu ọrụ nke ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa variants dị nnọọ a na-amaghị, ịmachi ojiji nke GWAS dị ka a nnyocha ngwá ọrụ.
Ọ na-e chere na mkpụrụ ndụ ihe nketa variants mata site na GWAS-anọchi anya kpọmkwem, ndu pụrụ ịkpata ọrịa - na "ọdịdị" kama ịbụ "nzulite" ọgwụgwụ nke ihe ize ndụ. Mụ na ndị òtù m nwere na nso nso a bipụtara a akwụkwọ nke anyị na-atụ aro na a pụrụ inwe ndị ọmụma karịrị nke ahụ ẹdude n'ime ya pụta.
Mgbe a GWAS nke ọrịa cancer akpa ume E duziri, otu mkpụrụ ndụ ihe nketa variant na e ike metụtara ọrịa cancer akpa ume bụ a mara variant dị n'ime na mpaghara chromosome 15 -akpọ "nicotine acetylcholine site n'usoro ihe nnabata ụyọkọ". Nke a variant e gosiri ike jikọrọ ọnụ ọgụgụ nke ndị sịga na-ese siga kwa ụbọchị, na ndị na-aṅụ sịga. Mgbe ọ pụrụ ịbụ ikpe na site n'usoro na-n'adabereghị amụba ihe ize ndụ nke ọrịa cancer akpa ume, nakwa dị ka arọ ise siga, o yiri yikarịrị nnọọ ka a variant ka a kpọrọ aha GWAS n'ihi ọrịa cancer akpa ume n'ihi na ise siga na-akpata ọrịa cancer akpa ume.
E nwere ihe ọzọ ezi ihe nlereanya na mmanya e ji amụ. A mkpụrụ ndụ ihe nketa variant e kwuru na-ebu amụma aṅụ oké mmanya. Ọ Koodu maka a protein na mgbari na-egbu egbu metabolites mmanya n'ime ndị na-abụghị ndị nwere nsí. Ọ bụrụ na ị na-adịghị nnọọ nke a protein, etoju nke iwepu nsị nwere ike iru elu, eme ka i chee ọrịa ma flushed. The variant bụ nnọọ nkịtị na European bi, ma a na-ahụkarị na bi na nke East Asia okpu. N'oge ndị a dị iche iche, GWAS nke ọbara mgbali elu mata nke a karịsịa mmanya metụtara genotype. Ma ọ bụghị hụrụ na GWAS nke ọbara mgbali elu na European bi. Nke a bụ n'ụzọ ziri ezi àmà siri ike na-aṅụ oké mmanya nwere ike iso kpata ọbara mgbali elu.
Nchọpụta ndị a mere ka ihe na-akpali echiche: ikekwe, nakwa dị ka ikwado causal mkpakọrịta anyị na-ama mara (dị ka ise siga na ọrịa cancer akpa ume), ọ pụrụ inyere anyị aka ịmata ihe ndị ọzọ causal ndị pụrụ ịkpata ọrịa. Ọmụmaatụ, otu ise siga variant e kwukwara na ọ bụ na a na-adịbeghị anya GWAS nke isi mgbaka - nwere ike pụtara na ise siga bụ a causal ihe so akpata n'ihi na ọrịa? ikekwe, ọ bụ ezie na ozokwa ule ga-adị mkpa iji gosi na nke a, dị ka ya ka kwere omume a nwere ike na-akọrọ mkpụrụ ndụ ihe nketa ije.
Ugbu a, isi mmachi na ikọ isi GWAS n'ụzọ dị otú a bụ na e nwere bụghị ezigbo ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa predictors nke ịgbanwe ihe ize ndụ ihe mara. Ma nke a na-agbanwe agbanwe. Ọmụmaatụ, anyị maara na afọ ojiji bụ dịkarịa ala nwere obere heritable, ekwu na e nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa akụrụngwa, ma dị ka ma ọ dịghị variants e kwuru. Mgbe ndị a variants na-amalite bụrụ ndị a na, ozi ke GWAS pụrụ imeghe ruo anyị.
Gịnịkwa mere nke a bara uru? Ọfọn, it’s much easier to help people change their lifestyle behaviours than it is to alter their genetics!
29532	5 mmanya, Nkeji edemede, Biology, mkpụrụ ndụ ihe nketa, Science, Science blog netwọk, Sifting ndị na-egosi, Smoking, Suzi Gage
← Samsung Galaxy S7 na S7 Edge Waterproof Smartphones The kasị nso-nso ara Technology na mepụtara [Na] →